सेरोफेरो : सलाईले बोलाइ
Sketch: Krishana Gopal Shrestha/Kantipur
जेष्ठ २, २०७३- कोठा निक्कै अँध्यारो थियो । केही चलेको आवाज सुनियो । टेबलको घर्रा उघारियो । ‘ओइ उठ्न,’ सलाईले मैन बत्तीलाई उठाउन खोजी । मैनबत्ती भर्खरै निदाएको थियो । उसले उठ्न मन नलागेझैं गर्‍यो । फेरि कोल्टो परेर सुत्यो । सलाईले मैनबत्तीलाई झकझकाई, ‘उठ् रे के, आर्जनले भनेको ।’ आर्जनको नाम सुनेपछि मैनबत्ती जीउ तन्काउँदै उठ्यो र सोध्यो, ‘के भो ?’ ‘उज्यालो चाहियो रे, आर्जनलाई ट्वाइलेट जानुपर्‍यो,’ सलाइले भनी । ‘बिजुली बाले भैहाल्यो नि,’ मैनबत्तीले टार्न खोज्यो । त्यसैबेला छामछुम गर्दै ५ वर्षे आर्जन नजिकै आयो, ‘बिजुली नै छैन, लोडसेडिङ छ । टर्चलाइटको पनि चार्ज सकिएछ क्या ।’ उसको कुरा सुनेर मैनबत्तीले सोध्यो, ‘तर तिमीले सलाईको काँटी कोर्न जानेका छौ त ?’ मैनबत्तीको कुरा सुनेर आर्जनले जानिहाल्छु नि भन्ने जवाफ दियो । सलाईले बल्ल होस पाई, ‘साँच्चि हो त, आर्जनले भुलेर सानो गल्ती गर्‍यौ भने त खत्तमै हुन्छ १’ मैनबत्तीले पनि कुरा थप्यो, ‘म बलेपछि यता उता लडें भने के गर्ने नि ?’ ‘लडेर के हुन्छ त ? म उठाइहाल्छु नि,’ आर्जनले सजिलै भन्यो । सलाईले आर्जनलाई सम्झाउन थाली, ‘मैनबत्ती बलेर लड्यो भने त उसले आडैको तिम्रो होमवर्क कापी जलाएर खरानी बनाइदिन्छ । कापीसँगै कार्पेट पनि जल्छ । कार्पेटसँगै कुर्ची टेबल पनि बल्न थाल्छ ।’
यस्तो सुनेर आर्जनले कपाल कन्याउन थाल्यो । खासमा बाबा आमालाई उठाएर दु:ख दिन उसलाई मनै थिएन । उसले आफैं बत्ती बालेर ट्वाइलेट जान्छु भन्ने सोचेको थियो । सलाई र मैनबत्तीको कुरा सुनेपछि भने उसले आमालाई उठायो । आमाले सलाई समाउनुभयो । सलाईले जकेटको खल्तीबाट एउटा काँटी झिकेर दिई । आमाले सलाईको काँटीले उसैको काँधमा रहेको खोरीमा कोर्नुभयो । काँटी झ्यार्र बल्यो । कोठा थोरै उज्यालो हुनेबित्तिकै मैनबत्तीले टाउको निहुरी पार्‍यो । उसको टुप्पीमा बलेको सलाईको काँटी परेपछि मैनहरू पग्लन थाले । कोठामा विस्तारै मधुरो उज्यालो फैलियो । आमाले मैनबत्ती समाएर आर्जनलाई ट्वाइलेटसम्म लगिदिनु भयो । मैनबत्ती ट्वाइलेटको झ्यालमा राखिदिनुभयो । सानो कोठा । सबैतिर उज्यालो भयो । दिउँसो चटपटे खाएकोले आर्जनको पेट गडबड भएको थियो । आर्जन ट्वाइलेट पसेपछि कोठातिर फर्कंदै आमाले भन्नुभयो, ‘भएपछि बोलाउनु है ।’ यता कोठामा आउनुभएको आमा त बस्दाबस्दै ओच्छ्यानमै फेरि निदाउनुभयो । आर्जन आफैं काम गर्न तम्सन्थ्यो । निदाउनुभयो होला भन्दै आमालाई फेरि बोलाएन । ट्वाइलेट गरेपछि उसले आफैं सफा गर्‍यो । अनि हात साबुन र पानीले धोयो । झ्यालमा राखेको मैनबत्ती समायो । ‘आथ्थु’ उसको हातमा पग्लेको मैनको थोपा परेछ । मैनबत्ती खिस्स हाँस्यो । आर्जनले थाहै पाएन । ऊ सरासर कोठामा आयो र बलेको मैनबत्ती टेबलमा राख्यो । उसको पेट अझै कुटुकुटु गर्दै थियो । आमाको नजिकै गयो अनि लुपुक्क सुत्यो । ‘आर्जन,’ कसैले उसलाई घचघच्याउँदै थियो । उठेर हेरेको सलाई पो रैछे । ‘के भो ?’ आर्जनले निधार खुम्च्याउँदै अर्धनिद्रामा सोध्यो । ‘मैनबत्तीले बोलाको छ,’ सलाईले भनी, ‘निभाइदेऊ रे, उसलाई पनि निद्रा लाग्यो ।’
आर्जनले भन्यो, ‘बलेरै सुते हुन्न र ? मलाई फेरि चाप्यो भने सजिलो हुन्छ ।’मैनले टेबलबाटै भन्यो, ‘मलाई बालेरै सुत्यौ भने म टेबलमै सकिन्छु अनि पछि फेरि मेरो टुप्पीको आगो बढेर सप्पै घरलाई जलाउँछ ।’ आर्जन झसङ्ग भयो । एकफेर सोच्यो अनि फेरि सोध्यो, ‘मलाई फेरि उज्यालो चाहियो भने नि ?’ ‘मेरो खल्तीमा अझै दुई/तीनवटा काँटी छन्, आमालाई भनेर फेरि बालांैला नि,’ सलाईले हाँस्दै भनी । सबै कुरा सुनेपछि आर्जनले टेबलको मैनबत्तीलाई ‘फू’ गर्‍यो । कोठा झ्याप्प अँध्यारो भयो । ‘हयाप्पी बर्थ डे टु यु’ अँध्यारोमा सलाईले आर्जनलाई जिस्काई । आर्जन मुसुक्क हाँस्दै, भुसुक्कै निदायो । प्रकाशित: जेष्ठ २, २०७३